सफलता भनेको स्वाभिमानको सुखमा रमाउन जान्नु हो
सानो होस् वा ठुलो, हरेक कोशिसका उपलब्धिहरू नै सुखद जीवनका विम्व हुन् । र, ती विम्वहरू सफलताका प्रतिसुचक हुन् । सफलताको गन्तब्य हुँदैन, किनकी सफलता भनेको परिवर्तनशिल मृगतृष्णाको प्रतिविम्व मात्र हो । सुख र सन्तुष्टिविना सफलताको न रूप हुन्छ, न रंग हुन्छ, न सुगन्ध नै हुन्छ !
सुख सन्तुष्टिका क्षणहरू अ्न्तरात्माबाट महसुस गर्न सक्नु पर्छ । यही सफल मान्छेको विसुद्ध गुण हो । सफलता भनेको जिन्दगीको अनटाइम छलाँग हैन, सुखद परिवर्तनका अनगोइङ प्रयास र प्रकृया हुन् ।
ईश्वरले मान्छेलाई अदृश्य उपहारहरू दिएका छन । सन्तान जन्मेपछि जब बच्चा मुसुक्क हाँस्छ, बामे सर्दै टुकटुक हिंडेर जब तोते बोली बोल्छ, स्कुलबाट कलेज सकेर जब काम गरेर २-४ पैसा कमाउँछ, बुढेसकालमा बुढाबुढी जब सँगै मर्निङवाक जान्छन्, ती तत्कालिन सुखद पलहरू के सफलताका कड़ी हैनन् र ? भएको बिर्सने, नभएको सम्झने प्रवृति नै असफलताको नकारात्मक सोच हो । कल्पना गरौं, यदि हामी ती ससाना सुखहरूबाट बन्चित हुनुपरेको भए !
जीवन वास्तवमा वरदानै वरदानको उपहार हो । यो समाजमा गरिब कोही छैन, कसैसँग पद, पावर र पैसा छ, कसैसँग श्रम, सीप, शिक्षा, सेवा, बुद्धि र अनुभव छ । जोसित जे छ, त्यत्ति मात्र दिन, बाँध्न र साट्न सक्यो भने पनि स्वाभिमानको सुखद अनुभूति लिन सक्छौ नि !
सफलता भनेकै यही स्वाभिमानको सुखमा रमाउन जान्नु हो ।
किसुनजी चाणक्य अवश्य थिए तर गणेशमानजीले धोकेबाज भनिदिए
सरकार-विप्लव सहमतिबारे कसले के भने ?
‘एक सोच’वाला श्रेष्ठका अनेक सोच
के, किन र कसका लागि लेख्ने ?